ငွေစက္ကူ ကိုင်တွယ်သုံးရန် မလိုသည့် လူ့အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်လာစေရန် Ongo နှင့် ananda တို့ ပူးပေါင်းပြီးြ? - Yangon Media Group
ငွေစက္ကူ ကိုင်တွယ်သုံးရန် မလိုသည့် လူ့အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်လာစေရန် Ongo နှင့် ananda တို့ ပူးပေါင်းပြီးြ?
ငွေစက္ကူ ကိုင်တွယ်သုံးရန်မလိုသည့် လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်လာစေရန် Ongo နှင့် ananda တို့မိတ်ဖွဲ့ပူး ပေါင်း၍ မြန်မာ့ဒစ်ဂျစ်တယ်ကဏ္ဍကို ပူးပေါင်းမြှင့်တင်မည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ အဆိုပါ ananda နှင့် Ongo တို့ မိတ်ဖွဲ့ပူးပေါင်းမှုလက်မှတ် ရေးထိုးပွဲအခမ်းအနားကို ရန်ကုန်မြို့ရှိ Pan Pacific ဟိုတယ်၌ ဒီဇင်ဘာ ၁၉ ရက်ကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ananda သုံးစွဲသူများ၏ မိမိအင်တာနက်အကောင့်များကို မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ရှိ ongo အေးဂျင့်ဆိုင်များတွင်လည်းကောင်း၊ ongo အက်ပလီကေးရှင်း၊ my ananda အက်ပလီကေးရှင်းတို့မှလည်းကောင်း လွယ်ကူစွာငွေ ဖြည့်သွင်းနိုင်စေသည်သာမက ananda အေးဂျင့်ဆိုင်များတွင် ananda ၏ ထုတ်ကုန်များကိုပါ လွယ်လင့်တကူဝယ်ယူနိုင်မည်ဖြစ် ကြောင်း သိရသည်။
ananda ၏ အမှုဆောင် အရာရှိချုပ် Alan Sinfield က ”မြန်မာနိုင်ငံက ငွေစက္ကူမလိုတဲ့ ဘဏ္ဍာရေးကဏ္ဍကို ဦးတည် လျှောက်လှမ်းနေတာပါ။ Ongo ဟာ သူ့ရဲ့ဆန်းသစ်တီထွင်တဲ့ဝန် ဆောင်မှုတွေ ထုတ်ကုန်တွေနဲ့ ဘဏ္ဍာရေးမှာ လူထုအားလုံးပါ ဝင်လာအောင် လုပ်ဆောင်ပေး နေတဲ့ ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာ ဦး ဆောင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ongo နဲ့ကျွန်တော်တို့ ananda ဟာ မြန်မာပြည်သူတွေကို ပိုမိုပြည့်စုံစွာနေထိုင်နိုင်စေဖို့ ပိုမိုကျယ်ပြန့်ပြီး စည်ပင်ဝပြော တဲ့ ဒစ်ဂျစ်တယ်ဘဝနေထိုင်မှု ပုံစံတစ်ခုကို ပိုင်ဆိုင်ရရှိစေဖို့ဖန်တီးပေးချင်တဲ့ ရည်မှန်းချက်ချင်း တူညီကြပါတယ်”ဟု ဒီဇင်ဘာ ၁၉ ရက်ကပြုလုပ်သည့် ယင်းသ ဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးပွဲတွင် ပြောသည်။
Ongo သည် မြန်မာနိုင်ငံ ရှိမြို့ကြီး ၅၅ မြို့တွင် ၎င်း၏ဝန် ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများကိုဖြန့်ကြက်ထားပြီး ၂ဝ၁၉ ခုနှစ်တွင် စီးပွား ရေးလုပ်ငန်းများနှင့် တစ်ဦးချင်း ongo ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြု ကြသူများအတွက် ၎င်း၏ငွေပေး ချေမှုပုံစံများကိုချဲ့ထွင်ရန် ရည် ရွယ်ထားရှိကြောင်း သိရသည်။ ထူးသဖြင့် ananda 4G+ အင်တာနက်ကို သုံးစွဲကြသော ongo အသုံးပြုသူများသည် ၎င်းတို့၏ ဒစ်ဂျစ်တယ်ဖျော်ဖြေရေး ကဏ္ဍများအတွက် ပေးဆောင် စရာရှိသည်များကို ongo အက်ပလီကေးရှင်းနှင့်လွယ်ကူစွာပေး ဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရသည်။
Ongo ၏ အမှုဆောင် အရာရှိချုပ် Allen Gilstrapu က ”ဈေးကွက် ကိုဦးဆောင်နေတဲ့ B2B ဒစ်ဂျစ်တယ် ငွေပေးချေတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင် နေတဲ့ ongo ဟာ ananda သုံးစွဲ သူတွေကို လွယ်ကူအဆင်ပြေပြီးလုံခြုံစိတ်ချရတဲ့ မိုဘိုင်းငွေပေး ချေမှုကို နေရာမရွေးလုပ်ဆောင် နိုင်အောင် ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။အခုလိုမိတ်ဖွဲ့ပူးပေါင်းလိုက်မှုက နေ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ငွေကြေးကဏ္ဍမှာ အားလုံးပါဝင်လာနိုင်အောင် လမ်းခင်းပေးလိုက်သလိုဖြစ်စေ ပြီး မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ ဒစ်ဂျစ် တယ်ဘဝနေထိုင်မှုပုံစံကိုလည်း မြှင့်တင်ပေးရာရောက်ပါတယ်”ဟု ပြောသည်။